Zvitoro - Shenzhen Radiant Technology Co., Ltd.
Flexible LED skrini
Mutambo we LED chiratidzo
Yakagadziriswa LED skrini
Hurumende & masangano edzidzo
Zvitupa uye patents
Large-nemanyorerwo akatungamirira sefa ndivo zvinokosha chikamu Digital Kunze Home nzvimbo
Zvinodzidzisa aida kuchinja,-digital papuratifomu kuunza pezvitsiga kuupenyu uye batanidza vanoshambadzira pamwe vatengi vari yakanaka pfungwa-kuisa kutenga.
Kune vakawanda nzira yakazarukira yokuitira achida yokugadza zvakatungamirira chidzitiro uye vazhinji Adi kuti vatengi wasarudza muenzaniso chinovhara muridzi.
Chinovhara muridzi inopa chinogombedzera nyaya kwenguva refu mari vanobatsirwa uye anoisa chitoro yokuitira uye pavanatenzi vavo muzvinhu yakasimba yezvokutengeserana nzvimbo apo vezvenhau zvibvumirano uye kushambadza zveminda hanya. Nepo sikirini Hardware mari vanokosha, zvakanaka zvinowanikwa nemakasitoma vakati tsanangurai uye vatenge dzavo akatungamirira nhau chidzitiro vari paupamhi-kusvika. Vakawanda recouped mari chidzitiro kwavo mukati nenguva 12-18 mwedzi.
Chakawedzera dzimwe kwemari rukova
Kutengesa kushambadza nzvimbo yako Shopping Centre akatungamirira Chinovhara inogona kukuru kwemari rukova. Akatungamirira sefa zvinogona kuratidza akawanda adverts kubvumira kuti kutengesa zvishomanana mugove uye vachiri kuramba mudziyo yenyu danidziro. Large Format Feature sefa mu zvitoro yakakwirira motokari nzvimbo uye kuzochera yakawanda maziso ichi kunoreva shoma Pricing nokuda zvokushambadzira nzvimbo.
Kuwana mamwe varimi
Kana yaunayo varimi vari kusarudza pakati vakawanda zvitoro ane Format Large akatungamirira Chinovhara kwako pakati aigona kuita musiyano. Pamusoro mufananidzo izvozvo zvipo, kukwanisa zvinogona kumusika kuchitoro yako pakati riri inopa guru mukana. Chakawedzera wakasununguka pfupi rokuti mugove kuratidzwa ringashandiswawo kuti zvinogona varimi pamusoro mutsetse
KUSVIRANA KWEMAHARA +86 755 83193425
ADDRESS 4th Floor, Building A1, Zhongtai Information Technology Industrial Park, No. 2, Dezheng Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province,China